के तपाई लाई धन कमाउन मन छ ? यदि मान छ भने आजैबाट जान्नुहोस् यी उपाय – Hamrosandesh.com
के तपाई लाई धन कमाउन मन छ ? यदि मान छ भने आजैबाट जान्नुहोस् यी उपाय
आजको विश्वमा सबै धनी हुने सपना देख्छन् । यसका लागि कडा परिश्रम पनि गर्छन । कडा मेहनतले मात्रै हामी पैसा कमाउन सक्दैनौ । यहाँ धर्मशास्त्रले आम्दानी बढाउन केही उपायहरू सुझाएको छ । आज हामी यस विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौ । आउँनुहोस् जानौं तपाईले आफ्नो आय बढाउन मन्त्र जप गर्न सक्नुहुन्छ । नियमित क्रिस्टल मोतीका साथ मन्त्र ‘ओम श्री महालक्ष्मयै नम’ जप गर्नुहोस् । धन वृद्धि गर्न रत्नको माला पनि लगाउन सकिन्छ । यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, तपाईं यसको लागि माणिक, मोती र कोरल लगाउन सक्नुहुन्छ । रत्न धारण गर्दै, दिमागमा राख्नुहोस् तपाईंको राशि चक्रको साथ कोसँग राम्रो सम्बन्ध छ ।